Wax ka ogow Afarta arrimood oo doorasho ku dhici doonto 8-da Federaayo. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Wax ka ogow Afarta arrimood oo doorasho ku dhici doonto 8-da Federaayo.
Wax ka ogow Afarta arrimood oo doorasho ku dhici doonto 8-da Federaayo.
Muqdisho (Walwaal.com) – Waxaa soo baxaya warar si hoose la isula dhex marayo oo sheegaya inay suurtal noqon doonto inay doorasho lagu mideysan yahay ay ka dhacdo dalka Soomaaliya marka la gaadho 8-da Feberaayo oo ay ka dhiman tahay mudo Labbo toddobaad iyo maalmo yar ahi.
Ilo lagu kalsoonaan karo oo la soo xidhiidhay Walwaal Media ayaa sheegay in dadaalada ay wadaan beesha caalamku ay ku doonayaan in laga midho dhaliyo siday u qabsoomi laheyd doorasho xiligeedii ku dhacda oo ay dhinacyadii siyaasadda Soomaaliya isku hayeyna ku mideysan yihiin.
Wakiilka QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa la rajeynayaa inuu maalmahan socdaal ku kala bixin doono maamulada Goboladda dalka isla markaasna uu la kulmi doono Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya, isagoo kala hadli doona ajandaha ay beesha caalamku dooneyso inay ku dhacdo doorashada loo madlan yahay.
Inkasta oo walaac xooggan laga muujinayo sida ay u suurtoobeyso inay qabsoonto doorasho xiligeedii ku dhacdaa, misana waxaa jira kalsooni ay beesha caalamku ku qabto in la raaco nidaamka ugu dhow ee doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ay ku qabsoomi karto marka la gaadho 8-da Feb.
Dadka u dhuun daloola qorshaha Beesha Caalamku doonayaan in doorashada Soomaaliya loo qabto ayaa ku soo beegmeysa xilli ay tashan waayeen siyaasiyiinta Soomaalidu, halkaasna ay noqotay in loo yeedhiyo doorasho ka bedelan midii ay isku diidanayeen.
Doorashadan ayaa la filayaa inaysan qayb ka noqon doonin Guddiga Doorashooyinka ee horay loogu iclaamiyey inay qabanayaan doorashada, marka laga reebo kuraasta Aqalka Sare oo la filayo in doorashadooda si toos ah loo guda geli doono maalmaha fooda inagu soo haya.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Walwaal Medeia ayaa tibaaxaya in gundhiga doorashada ay beesha caalamku doonayaan inay Soomaaliya ka dhacdo ay noqon doonto sidan:-
In maamulada Goboladu ay soo doortaan xubnihii ku meteli lahaa Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo aan maamulada Goboldda lagu faragelin doonin qabsoomida doorashadaas.
In Golaha Shacabka ee hadda jira ay sii metelaan Xildhibaanadii beelaha Soomaaliya muddo sanad ah, maadaama lagu guul darreystay in la soo xulo Xildhibaano cusub wakhtigii ku haboonaa ee loo baahnaa.
Labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya inay awood u yeeshaan inay doortaan Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Afarta sano ee soo socota.
In mudada Afarta sano ah ee la doortay Madaxweynaha cusubi iyo xukuumadiisu ay gaarsiiyaan shacabka Soomaaliyeed hanaanka dimoqraadiga ah oo ay si xor u doortaan cidda ay rabaan (One Man One Vote).
Tallaabooyinkan ayaa la filayaa inay soo dhoweyn doonaan dhamaan siyaasiyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maamulada Goboladda iyo Musharixiinta u loolamaya xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Su’aasha la is weydiin karo ayaa ah yey faa’iido u noqoneysaa talaabooyinkaasi haddii ay hirgalaan oo lagu heshiiyo?
Qormada danbe Ayaan kaga faaloon doonaa haddii Rabbi idmo.
Previous articleWax ka ogow Afar arrimood oo doorasho ku dhici doonto 8-da Federaayo.
Next article51 dawladood ee afrika sidee u kala ciidan wanaagsanyihiin
Faransiiska ayaa qaban doona shir ka hor doorashooyinka muhiimka ah ee Liibiya
31 dal ayaa qaadacaya shirka Durban ee Arbacada